Dowladda Kenya Oo Sheegtay In Ay Bilowday Baaritaanka Diyaarad Ku Dhacday...
Dowladda Kenya oo sheegtay in ay bilowday baaritaanka diyaarad ku dhacday…
Khamiis, Luulyo, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – Maamulka Duulista Hawada ee Kenya ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaano la xiriira diyaarad ku dhacday xero militari oo ku taal magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Iyadoo ay saarnaayeen 45 rakaab ah.Agaasimaha guud ee hay’adda Duulista Hawada ee Kenya (KCAA) Gilbert Kibe, ayaa sheegay diyaaradu in ay u dhoweyd xadka Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Elwak.
Wuxuu xaqiijiyay in aanay jirin wax dhaawac ah oo la soo sheegay illaa iyo hadda.
Wararka Maanta : Hoyga Jacob Zuma oo ay Isku Gadaameen Tageerayaashiisa
Diyaaradda ayaa ka ambabaxday garoonka diyaaradaha ee Wilson ee Nairobi, waxayna ku sii jeeday magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya subaxnimadii Arbacada markii ay dhacdadu dhacday.
Aagga Gedo waxaa gacanta ku haya Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (SNA) in kasta oo kooxda al-Shabab, ay mararka qaar weeraro argagixiso ka fuliso gobolka Gedo.
Xoogaga Al-Shabaab oo billaabay inay isu soo dhiibaan Galmudug – Caasi…
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka ka dhex taagan xubnaha…
Guddoomiyihii hore gobolka Gedo oo sheegay in mar kale laga celiyay…
Wararka Maanta : Yaa ka dambeeyey dilka madaxweynihii dalka Haiti? - Wararka Maanta
Wararka Maanta : Puntland oo bilowday wajigii labaad maxkamadaynta xubno katirsan ururka...
Wararka Maanta : Bulshada rayidka oo siyaasiyiinta uga digay in ay faro galin ku sameeyaan...
Wararka Maanta : Rooble oo si diiran loogu soo dhaweeyay Garbahaarey (SAWIRRO)
Jimco, Luulyo, 23, 2021 (Wararka-Maanta) – Gudoomiyahii hore ee Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji (Macalimuu), ayaa sheegay in hay’ada nabad sugida ay saaka mar kale ka celisay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isaga iyo wafdi la socday.Guddoomiyihii hore ee Gedo wuxuu sheegay amarka lagu celiyay inuu bixiyay taliye ku xigeenka hay’adda nabad sugida, Cabdullaahi Kulane.
“Saakay aniga iyo tiimkayga waxaan tagnay garoonka, anigoo qabay dareen ah in nala celin doono, balse ku kalsoon hadalkii raysal wasaaraha. Markii aan tagnay garoonka, qolyihii duulimaadka waxay noo sheegeen in aanan bixi Karin, ayuu yiri Cismaan Nuur.”
Macalimoow wuxuu sheegay xanibaada lagu sameeyay in ay xadgudub ku tahay go’aankii R/Wasaare Rooble ee ahaa in aan qofna laga celin karin garoomada diyaaradaha ee dalka.
“Waxaa ceeb ah in maanta raysal wasaarihii u sareeyay dalka, amarkiisa ciddii diiday, waxaan u maleynayaa in meel kale laga xukumo… Waxaan jawaab ka sugaynaa raysal wasaarha, waxaana ku qanci karnaa inuu kulane Jiis awoodda uu ku faanayo ka qaado,”ayuu yiri guddoomiyihii hor ee Gedo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa maalmo ka hor faray laamaha socdaalka JFS in aan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u kala safraya dalka loo xannibi Karin sababo siyaasadeed.
Wararka Maanta : Wasiir Cabdiwahaab Ugaas: Degmada Ceel-Barde waxay muhiimad u leedahay guud...
Maxay tahay ujeeddada ay ISRAEL ka leedahay ku biiritaanka Midowga Afr…
Jerusalem (Wararka Maanta) – Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israel ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Israel ay dib ugu biirayso Midowga Afrika, iyadoo noqonaysa waddan kor jooge ah.
Tallaabadan ayaa sida uu qoray wargeys kasoo baxa Israel waxay timid ku dhawaad 20 sano kaddib markii Israel ay waysay xubinnimada ururkan wixii ka dambeeyay markii laga beddalay magaca ee la sameeyay Midowga Afrika.
Waxaa lagu soo warramay in safiirka u jooga Israel magaalada Addis Ababa uu warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay Guddoomiyaha Midowga Afrika, Mousa Faki Mahamat, si uu xubin kormeere ah uga noqdo ururka. Kulankaas ayaa ka dhacay xarunta AU ee caasimadda dalka Itoobiya.
Warbaahinta Israel ayaa soo xigatay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Yair Lapid oo sheegay, “Maanta waxay dabbaal-dag u tahay xiriirka Israel iyo Afrika.”
Wararka Maanta : Xog: Isbaheysiga mucaaradka SOMALILAND oo wajahaya culeys hor leh + Sa...
Wuxuu intaas ku daray: “Horumarkan dhinaca diblomaasiyadda ah waa natiijada dadaalkii Wasaaradda Arrimaha Dibadda, laanteeda Afrika iyo safaaradaha Israel ee qaaradda Afrika.”
Wuxuu sidoo kale yidhi: “Tani waxay saxaysaa khaladaadkii jiray ku dhawaad labaatan sano, waana qayb muhiim ah oo ka mid ah xoojinta xiriirka dhinaca dibadda ee Israel.”
Lapid ayaa sheegay in Israel ay hadda xiriir fiican la leedahay 46 waddan oo ka tirsan Qaaradda Afrika.
Israel ayaa isku dayaysa in ay adkayso cilaaqaadka kala dhaxeeya 55-ta waddan ee xubnaha ka ah Midowga Afrika, sida ay tabiyeen warbaahinta dalkaas.
Arrimaha kale ee sababta u ah ku biirista AU waxaa ka mid ah in Israel ay doonayso sidii ay u badin lahayd waddamada ugu codeeya arrimaha ay ka doonayso hay’adaha caalamiga ah, sida Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Waxaa kale oo ay Israel doonaysaa inay kala shaqeyso arrimo ay ka mid yihiin la dagaallanka argagixisada, xakamaynta Covid-19 iyo kobcinta ganacsiga beeraha.
Qaar ka mid ah bogagga internet-ka wax ku qora ee Israel ayaa shaaciyay in dowladda dalkaas ay dhawaan xiriirkii diblomaasiyadeed dib ula billowday dalalka Chad iyo Guinea, kuwaasoo ay horay xiriirka ugu jartay.
Sanadkii 2020-kii, Israel ayaa sidoo kale heshiisyo la saxiixatay Suudaan iyo Morocco.
Bishii May ee lasoo dhaafay, madaxa Midowga Afrika Mousa Faki Mahamat ayaa cambaareeyay duqaymihii ay Israel ka fulisay Marinka Qasa iyo weerarradii ay ciidamada Israel ka geysteen Masjidka Al-Aqsa.
Wararka Maanta : Wafti Jabuuti ka socda oo soo gaadhay caasimada Somaliland ee Hargaysa
Wuxuu xilligaas sheegay in militariga Israel ay sameynayeen “ficillo gurracan oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah”.
Bayaan uu Faki soo saaray Khamiistii ayuu ku sheegay in Midowga Afrika uu “caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan in labo dowladood oo iska barbar dhisan lagu xalliyo arrinta Falastiiniyiinta iyo Israel, taasina ay muhiim u tahay nabadda gobolka.”
Wararka Somali38 mins ago
Caalamka Videos2 hours ago
Wararka Videos5 hours ago
Wararka Videos11 hours ago
Caalamka Videos22 hours ago
Caalamka Videos6 days ago
Wararkii ugu Danbeeyey Maraykanka oo 22 Diyaaradood oo Dagaal ah udiray …